China Deep uzo Ball Iburu ụlọ ọrụ na-emepụta | Na-emighị emeri Yong
The ngwa nso nke miri uzo bọl biarin bụ nnọọ mbara. Ha kwesịrị ekwesị maka oke ọsọ na ngwa ngwa ngwa ngwa, gbanwee maka radial na axial ibu na ụzọ abụọ, ọ na-esiri ike mmezi. Deep uzo bọl biarin na ọtụtụ-eji agba ụdị. Okey biarin na-enye ọtụtụ aghụghọ, ụdị dị iche iche na nha dị omimi.
Deep uzo bọl amị bụ ihe kasị nkịtị ụdị Rolling agba. Ihe bụ isi miri emi obi ụtọ bọọlụ mejupụtara ihe mgbanaka dị n'ime, mgbanaka dị n'ime, a set nke bọọlụ ígwè na a set nke retaining etiti. Ọdịdị ya dị mfe, dị mfe iji, bụ nrụpụta kachasị arụ ọrụ, ụdị nke a na-ejikarị eme ihe. Enwere ike iji bọọlụ bọọlụ miri emi mee ihe na nkenke, gearboxes, akụrụngwa, motọ, ngwa ụlọ, ngwa ọrụ ọkụ ọkụ n'ime ụlọ, ụgbọ njem njem, akụrụngwa akụrụngwa, igwe ihe eji arụ ọrụ, injinia injinịa, yo yo, wdg.
E nwere ụdị abụọ nke miri emi bọọlụ biarin: otu ahiri na abụọ ahiri. Ọdịdị nke miri uzo bọl na-ekewa n'ime akara na-emeghe Ọdịdị. Open ụdị pụtara na amị enweghị sealing Ọdịdị, na kaa akara miri uzo bọl na-ekewa ájá akara na mmanụ àmà akara. Ihe nke ihe mkpuchi uzuzu bu ihe eji emeputa nchara, nke nwere ike igbochi uzuzu ịbanye na agba ọsọ. Proofdị ihe akaebe nke mmanụ bụ akara akara mmanụ kọntaktị, nke nwere ike igbochi griiz na amị ahụ iji jupụta.
Deep uzo bọl amị bụ ndị na-abụghị separable agba, ya Ọdịdị dị mfe, na ọ na ọtụtụ-eji. Na mgbakwunye na nke isi ụdị, miri uzo bọl amị nwekwara dị iche iche variant owuwu, dị ka: miri uzo bọl agba na ájá mkpuchi, miri uzo bọl agba na roba akara mgbanaka, miri uzo bọl agba na-akwụsị uzo, full juru miri miri uzo bọl agba na nnukwu ibu ikike na bọl loading ọdịiche.
Bọọlụ bọọlụ miri emi na-ebu ibu ibu ibu, kamakwa ọ nwere ike iburu ibu radial na ibu axial. O kwesịrị ekwesị maka ịrụ ọrụ ọsọ ọsọ. Mgbe naanị ya na-ebu ibu radial, nkuku kọntaktị ahụ bụ efu. Mgbe miri uzo bọl amị nwere nnukwu radial nwechapụ, ọ nwere arụmọrụ nke angular kọntaktị amị na ike ibu nnukwu axial ibu. Esemokwu onu nke miri uzo bọl amị bụ obere na ịgba ọsọ dị elu, ma ọ bụ adịghị adabara na-ebu ibu arọ. Mgbe mkpochapu radial buru ibu, ikike axial na-abawanye, nkuku kọntaktị bụ efu n'okpuru ike radial dị ọcha. Mgbe enwere ike axial, nkuku kọntaktị karịrị efu.
Bọọlụ bọọlụ miri emi na-ebu ibu ibu ibu, kamakwa ọ nwere ike iburu ibu radial na ibu axial. Mgbe naanị ya na-ebu ibu radial, nkuku kọntaktị ahụ bụ efu. Mgbe miri uzo bọl amị nwere nnukwu radial nwechapụ, ọ nwere arụmọrụ nke angular kọntaktị amị na ike ibu nnukwu axial ibu. Esemokwu onu nke miri uzo bọl amị bụ obere na ịgba ọsọ dịkwa nnọọ elu.
Osote: Hub Iburu
QYBZ Deep uzo Ball Iburu m
QYBZ Deep uzo Ball Iburu III